Warshad OIML - Shiinaha Soosaarayaasha OIML, Alaab-qeybiyeyaal
Miisaannada miisaanka OIML CLASS E1 qaab dhululubo ah, bir bir ah oo dhalaalaya
Miisaanka E1 waxaa loo isticmaali karaa inuu noqdo heerka tixraaca ee lagu cabirayo culeysyada kale ee E2, F1, F2 iwm, oo ku habboon in lagu miisaamo dheelitirka sare ee gorfaynta iyo saxnaanta dheellitirka sare. Warshado, Miisaanno Warshadeed, iwm
Miisaannada miisaanka 'OIML CLASS F1 cylindrical, steel steel safe'
Miisaannada F1 waxaa loo isticmaali karaa inay noqdaan tixraac halbeeg lagu cabirayo culeysyada kale ee F2, M1 iwm, waxayna ku habboon yihiin in lagu miisaamo dheelitirka sare ee gorfaynta iyo saxsanaanta sare. Sidoo kale cabirka miisaanka, dheelitirka ama alaabooyinka kale ee miisaamaya ee ka soo baxa Warshadaha Daawada, Warshadaha Miisaanka, iwm.
Miisaannada miisaanka 'OIML CLASS M1 cylindrical, steel steel safe'
Miisaannada M1 waxaa loo isticmaali karaa inay noqdaan tixraac lagu cabbirayo culeysyada kale ee M2, M3 iwm. Sidoo kale Calibration for miisaanka, dheelitirka ama alaabooyinka kale ee culeyska ka qaada shaybaarka, Warshadaha Daawooyinka, Warshadaha Miisaanka, qalabka waxbaridda ee iskuulka iwm
Miisaannada miisaanka 'OIML CLASS F2' cylindrical, steel steel steel dhalaalaya
Miisaannada F2 waxaa loo isticmaali karaa inay noqdaan tixraac lagu cabbirayo culeysyada kale ee M1, M2 iwm. Sidoo kale Calibration for miisaanka, dheelitirka ama alaabooyinka kale ee miisaanka leh ee ka soo baxa Warshadaha Daawooyinka, Warshadaha Miisaanka, iwm.
Miisaannada miisaanka 'OIML CLASS E2 cylindrical', birta aan fiicnayn ee birta leh
Miisaannada E2 waxaa loo isticmaali karaa inay noqdaan tixraac halbeeg lagu cabirayo culeysyada kale ee F1, F2 iwm, waxayna ku habboon yihiin in lagu jaangooyo isku dheelitirka sare ee gorfaynta iyo saxnaanta dheellitirka sare. Warshado, iwm
Miisaan culus CAST-IRON M1 miisaanka 100kg ilaa 5000 kg (qaab qaab leh)
Dhammaan Miisaanka Miisaanka Kabaha ee loo yaqaan 'Cast Iron Calibration' waxay u hoggaansamayaan qawaaniinta ay dejiyeen Ururka Caalamiga ah ee Saadaasha Hawada iyo ASTM ee heerka M1 illaa M3 miisaanka -iron.
Marka loo baahdo shahaado madaxbannaan ayaa lagu bixin karaa iyada oo la aqoonsan yahay wixii aqoonsi ah.
Miisaanka Bar ama Gacanta waxaa la siiyaa iyaga oo ku dhameystiran tayo sare leh Matt Black Etch Primer waxaana lagu soo koobay dulqaadyo kala duwan oo aad ka arki karto jaantuskeena.
Miisaanka Gacanta waxaa la siiyaa iyagoo ku dhameystiran tayo sare leh Matt Black Etch Primer iyo r Miisaanka
Culeyska culus ee culus OIML F2 Qaab afar gees leh, ahama bir dhalaalaya iyo birta dahaadhan chrome
Jiajia culeysyada culus ee leydilalka afar geeslaha ah waxaa loogu talagalay in lagu hubiyo habdhaqan shaqo oo aamin ah oo hufan, iyaga oo ka dhigaya xalka ugu habboon ee hababka isukeenista soo noqnoqda. Miisaannada waxaa loo soo saaray si waafaqsan heerarka OIML-R111 ee maaddada, xaaladda dusha, cufnaanta, iyo birlabta, culeysyadan ayaa ah xulashada ugu habboon ee shaybaarada heerarka cabbiraadda iyo Machadyada Qaranka.
Miisaannada tuurista miisaanka leymanka ee OIML F2
Miisaannada afar-geesoodka ahi waxay oggolaanayaan isku-xirnaan nabdoon waxaana lagu heli karaa qiimayaal magac u yaal ah 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg iyo 20 kg, oo lagu qanci karo khaladaadka ugu badan ee la oggol yahay ee heerka OIML F1. Miisaanadan dhalaalaya ayaa damaanad qaadaya xasiloonida ba'an ee nolosheeda oo dhan. Miisaankani waa xalka ugu fiican ee codsiyada lagu dhaqo iyo isticmaalka qolka nadiifka ah ee dhammaan warshadaha.
Miisaannada afar-geesoodka ah ee OIML M1 Qaab-dhismeedka qaabdhismeedka, dhinaca hagaajinta dhinaca, birta la tuuray
Miisaankeena birta lagu shubay waxaa loo soo saaray si waafaqsan Soo-jeedinta Caalamiga ah ee OIML R111 oo ku saabsan maaddada, dusha sare, cufnaanta iyo birlabta. Dahaarka laba-qaybood wuxuu hubiyaa dusha sare ee siman oo aan lahayn dildilaacyo, godad iyo geesaha fiiqan. Culeys kasta wuxuu leeyahay saxa hagaajintiisa.
Miisaannada afar-geesoodka ah ee OIML M1 Qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka, dusha sare ee hagaajinta, birta la tuuray
Miisaannada laba jibbaaran OIML M1
Miisaannada laba jibbaaran OIML F2
Miisaannada Miisaanka ee Miisaanka Dijital ah, Shear Beam Load Cell, Miisaanno La Xaqiijiyay, Miisaan Miisaanka Miisaaniyadda, Miisaanka Miisaanka Miisaanka, Mass Calibration,